चेक काट्दै हुनुहुन्छ ? होसियार ! ‘बाउन्स’ भए यस्तो कारबाही हुन्छ भन्दै राष्ट्र बैंकले सूचना निकाल्यो « Clickmandu
प्रकाशित मिति : २८ फाल्गुन २०७५, मंगलवार ११:२३
काठमाडौं । तपाईंको बैंक खातामा पैसा छैन । तर, तपाईंले सोही खाताको चेक जारी गर्दै हुनुहुन्छ भने होसियार । किनभने काटेको चेक बाउन्स भयो भने तपाईंलाई कडा कारबाही हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार गोर्खापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पैसा नभएको खाताको चेक नकाट्न अनुरोध गरेको छ ।
‘कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा पर्याप्त मौज्दात रकम नभएको जानीजानी कसैलाई चेक काटी दिनु हुँदैन । यदि कसैले त्यस्तो कार्यगरी उक्त चेकको रकम भुक्तानी नभएमा बैंकिङ कसूर गरेको मानी चेक काट्ने व्यक्तिलाई बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना र ३ महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था रहेकाले त्यस्तो कार्य नगर्न, नगराउन यो सूचना जारी गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
कसैसँग तपाईंले ऋण लिनु भएको छ । र, तिर्न ढिलाइ गरिरहनुभएको छ भने तपाईंलाई साहूले चेक काट्न दबाब दिनसक्छन् । यस्तो अवस्थामा बैंक खातामा पैसा नहुँदा नहुँदै पनि तपाई चेक काट्न बाध्य हुनुहुन्छ ।
अर्को, कतिपयको नियत कसैलाई चेक दिएर झुलाउने हुन्छ ।
जुनसुकै अवस्थामा होस् तपाईंले काटेको चेक बाउन्स भयो भने तपाईं कारबाहीको भागिदार बन्नु पर्छ नै ।
तपाईंलाई कसैले पैसा नभएको खाताको चेक दिएको छ भने तपाईंले प्रहरीमा गएर उजुरी दिनुहोस् । बाउन्स चेकको उजुरीमा प्रहरीले गम्भिर रुपमा लिन्छ । र, चेक जारी गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गर्छ ।
एउटै चेक तीन पटकसम्म बाउन्स भएका व्यक्तिलाई भविष्यमा कुनै पनि बैङ्कमा खाता खोल्न तथा ऋण लिन नपाउनेसम्मको सजाय हुन सक्छ । त्यतिमात्रै होइन, बैंकिङ कसूर ऐन अन्तगर्तत तपाईं जेलसमेत बस्नुपर्ने हुन्छ ।
चेक साटिएन भने बैंकका कर्मचारीलाई भनेर चेक जारी गर्ने मान्छेलाई यो कारणले फलानो नम्बरको फलनो मितिमा काटिएको चेक साटिएन भनेर जानकारी गराउन लगाउनुपर्छ ।
चेक काट्ने मान्छेलाई बैंकले चेक नसाटिएको जानकारी गरायो । तर फेरि पनि चेक साटिएन भने बैंकका कर्मचारीलाई भनेर चेक बाउन्स भएको प्रमणित गर्न लगाउनुपर्छ ।
कतिपय अवस्थामा बैंकका कर्मचारीहरुले ‘एकपटक उहाँलाई सोध्नुहोस्,’ भन्दै चेक बाउन्स गर्न आनाकानी गर्न पनि सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा तपाईंले कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुपर्छ ।
तपाईंले आग्रह गर्दा पनि बैंकका कर्मचारीले चेक बाउन्स गर्न मानेनन् भने तपाईंले राष्ट्र बैंकमा गएर उजुरी दिनसक्नुहुन्छ । राष्ट्र बैंकमा उजुरी गरेपछि भने तपाईंको काम हुन्छ ।